Iimaski ezili-11 zeDiving ezigqwesileyo zika-2021 - Ibhlog
Iimaski ezili-11 eziGqwesileyo zokuDiva ze-Scuba zika-2021
Iimaski ezili-11 zeDiving ezigqwesileyo ezikhoyo ngo-2021
Scuba Diving Masks-Isikhokelo sokuthenga
Xa uphonononga umhlaba ngaphantsi kwamanzi, iimaski zakho zescuba ngamehlo akho. Bakuvumela ukuba ubone izinto ezimangalisayo ezinje ngeengqaqa, iiflethi zodaka, kunye nezidalwa ezizodwa. Ke, ukuba ujonge ezona maski zibalaseleyo zokuntywila ukwenza ukuba uhambo lwakho lube mnandi ngakumbi, ufike kwindawo elungileyo njengoko sikuzisela uludwe lokhetho olukhulu.
Ezi maski zinceda ukugcina umbono wakho ucocekile kwaye wenze kube lula ukuhamba iimfihlakalo zolwandle. Bakwakulungele kakhulu ukunxiba ixesha elide kwaye beza kuyilo olwahlukeneyo. Ngaphezu koko, ezi maski zilula epokothweni kwaye zifikeleleke kubaqalayo. Ke, jonga iimpawu zento nganye kwaye ukhethe eyona ndlela ilungileyo kwiimfuno zakho ezithile kunye namava okuntywila ongalibalekiyo.
Ungathenga phi amakhadi ezipho e-visa ngaphandle kwemali
Iimveliso eziphezulu ezivela kuLuhlu lwethu
Ixabiso kwiAmazon Ixabiso kwiWalmart
Nye. I-Speedo Adult Recreation Dive Mask
Thenga ngoku kwiAmazon Thenga ngoku kwiWalmart
Nje ukuba uphantsi kwamanzi, akufanele ube nexhala malunga ne-mask yakho inikezela kuwe. I-Speedo yenye yeebrendi eziphambili kwimpahla yezemidlalo kwaye bayazi kakuhle into oyifunayo. Le maski yenzelwe ukunika intuthuzelo engatyibilikiyo. Yenziwe kwi-100% yesiketi se-silicone esivakala sithambile ebusweni bakho. Ingena ngokugqibeleleyo kwaye yenza itywina ukuthintela amanzi ukuba angavuzi. I-lens yenziwe kwi-polycarbonate, igqitywe nge-Anti-Fog Max coating eyenza ibekhaphukhaphu ngokugqithisileyo ngelixa inika umbono ocacileyo.
Ibonelela ngokugubungela ngokupheleleyo.
Umtya we-Speed ​​​​Fit uvumela ukulungelelanisa umtya njengoko kufuneka.
Mbini. I-AQUA I-DIVE IMIDLALO Scuba Snorkeling Dive Mask
Udinga imaski ekumgangatho ophezulu ukuze ufumane amava abalaseleyo okuntywila. Apho ezinye iibhrendi zinokusilela ukunika ii-engile zakho zokujonga ezifanelekileyo, i-AQUA A DIVE ibonelela nge-180 ° yokukwazi ukujonga. Izinto ze-polycarbonate zomeleza iipropathi ze-lens zokuphucula unyango lwe-anti-inkungu. Inika umsebenzi wokulwa nokuwa ekukholelwa ukuba womelele kuneglasi eqiniweyo. Isebenzisa i-silicone yolwelo oluthambileyo lwebakala lokutya kunye noyilo oluphindwe kabini lolwelo olungangeni manzi ukuthintela ukuvuza kwamanzi.
Ineempawu zokumelana ne-UV zokhuseleko olungcono lwamehlo akho.
Ibhanti ye-elastic silicone ine-buckle eguquguqukayo ngokulula yokusetyenziswa kwesandla esinye.
Ilensi yenziwe kwisiqwenga esinye ukuze ijongwe kakuhle.
3. OCTOMASK – Dive Mask w/Mount For GoPro Cameras
I-OCTOMASK inekhamera ye-GoPro eyakhelwe-ngaphakathi yabantu abathanda ukubamba amaxesha akhethekileyo. Nokuba yeyiphi imodeli yeGoPro onayo, ungayixhoma kule maski. Imaski inesiketi esithambileyo se-silicone se-matte esenziwe kumgangatho ophezulu kunye nezixhobo ezihlala ixesha elide ukuze zikhululeke kwaye ziphile ixesha elide. Ilungele abantu abanobuso obuphakathi ukuya kobukhulu obukhulu. Ifumaneka ngeentlobo ezimbini-ezisemgangathweni kunye neFrameless. Iquka isikhwama sokuhamba ngokukhawuleza esomileyo.
Iingoma zekrisimesi kwikwayala yabantwana becawa
Uyilo olunomthamo ophantsi lulungele ukukhulula kunye ne-spearfishing ngokunjalo.
Iilensi zenziwe ngeglasi epholileyo yokhuseleko oluphindwe kabini ukwenzela ukuqina.
Inentongomane ebethelelwe kwizikhonkwane zesithupha ezingayi kuwa xa zingasikrolwanga.
Isine. Hollis M1 Frameless Scuba Diving Mask
Ukuba nombono ocacileyo yenye yezinto eziphambili zokuntywila ngaphantsi kwamanzi. Le imaski ye-M1 engenaFrameless Scuba Diving yenye yezona zinto zibalaseleyo kwimarike. Inika umgangatho obonakalayo kunye nombono ongenakonakala oyimfuneko kumsebenzi. Isebenzisa iSaint-Gobain Diamant ebonelela ngokujonga okucacileyo kwekristale. Iilensi zinkulu ngokwaneleyo ukukunika umbono obanzi kwaye zixhaswa yi-100% yesiketi esithambileyo esisulungekileyo esivakala simnandi kakhulu ebusweni.
Inentambo eyomeleleyo yohlengahlengiso olulula.
I-snorkel eyomileyo ngaphezulu ithintela amanzi ukuba angavuzi.
Emazantsi, inombhobho omkhulu wokukhupha kunye nevalve yokucoca ukuze kucocwe kakuhle amanzi.
5. I-Cressi Nano yeMask emnyama
Ngaba udiniwe imaski yakho yokuntywila kwaye ufuna entsha? I-Cressi Low Volume Mask yaBantu abadala yenzelwe ngokukodwa abo bahlukeneyo. Inika i-hydrodynamic ngokugqithisileyo kunye nemilo ehlangeneyo kwaye ivumela abahlukeneyo ukuba bahambe kwiindawo ezincinci. IneTekhnoloji yeTekhnoloji eDityanisiweyo eDityanisiweyo yeSakhelo esiNxibelelwano eyehlisa kakhulu umthamo wangaphakathi kwaye ayifuni ukulinganisa ngabom. Iibhanti ezijikelezayo zifakwe kwisakhelo ngokuthe ngqo ukwenzela ukuphuculwa kozinzo.
Amabhanti aphantse angonakali kwaye anolawulo lwe-micrometric.
Ineelensi ezijijekileyo zokuwisa ukuze ibonakale ngcono.
Inesakhelo esisiqwenga esinye esinobungqingqwa obuncitshisiweyo kwaye ngaphandle kweengcingo, okwenza kube lula kakhulu; inobunzima obumalunga ne-125 g.
6. Scubapro Solo Scuba Snorkeling Dive Mask
Olona phawu lubalaseleyo lokujonga i-panoramic ngelixa uphantsi kwamanzi, yonke into oyifunayo yi-SCUBAPRO Solo Scuba Snorkeling Dive Mask. Esi sesona sinxibo sithenjiweyo ngabatshuzi abachwepheshile.
Inelungelo elilodwa lomenzi we-lens yoyilo kunye neefestile ezisecaleni ezibanzi ngokwaneleyo ukukunika i-engile yokujonga ebanzi. I-buckles inentaba eguquguqukayo exhunywe kwi-skirt, ekuvumela ukuba ubeke lula kwi-strap ukuze ufezekise ukulungelelaniswa.
Yimaski enomthamo ophantsi wangaphakathi.
Iilensi zenziwe nge-Tempered Glass ukuze ziqine.
I-silicone etywinwe kabini i-skirt sculpts yenza isitywina esingenamanzi ukuze sithuthuzeleke.
7. Scubapro Synergy Twin Trufit Scuba Diving Mask
Sinenye enye evela eScubapro. Yintoni esinokuyithetha, benza iimveliso ezimangalisayo! I-Synergy Twin Trufit ithatha isizukulwana sesibini iTrufit Technology ngezona ziphumo zibalaseleyo. Ngokungafaniyo neyokuqala, oku kubonisa i-skirt eninzi kunye ne-firmer exhasa isakhelo kwaye ibonelela ngokungqongqo. Isebenzisa i-silicone ebhityileyo ebumba ubuso bakho ukuze itywine ingangeni manzi. I-buckles ekhutshwe ngokukhawuleza ifakwe kwi-skirt endaweni yesakhelo ukuvumela uluhlu lweentshukumo. Unoluhlu olubanzi lwemibala onokukhetha kuyo.
Intombazana ehloniphekileyo kwintetho kadade
I-lens ye-double-lens ye-volume low-volume design inika ii-angles zokujonga ngokubanzi.
Inenkqubo yebhanti ekulula ukuyibopha.
Uyilo lwentambo luvumela imaski ukuba isongwe ibe mcaba ukuze ipakishwe lula.
8. Isigqubuthelo seMaski esingena Frameless seAtomic Venom
I-Atomic Venom Frameless Mask yimaski yokuntywila yonke-in-one enentuthuzelo enkulu, i-optics ekumgangatho ophezulu, kunye nesimbo. Iilensi, ezakhiwe ngeglasi eyomeleziweyo epholileyo zibanzi kwaye zicacile. Isiketi semaski kunye nesitywina sobuso senzelwe ukudibanisa ii-silicones ezimbini ezahlukeneyo. I-Gummi Bear UltraSoft yenza isitywina sobuso esithambileyo kwaye sikhululekile ngelixa i-silicone yesibini igcina imaski yomelele nakwezona meko zinzima. Unokukhetha phakathi kwemibala emibini yemibala- Onke aMnyama kunye noMnyama oBomvu.
Isebenzisa i-lens ye-Schott Superwite UltraClear evumela i-96% yokukhanya okukhoyo ukuba idlule.
I-lens enkulu yefestile enye ibonelela ngokujonga ngaphandle kokuphazamiseka kuzo zonke ii-angles.
Ineqhina elijikelezayo elidityanisiweyo.
9. I-Oceanic Shadow Frameless Dive Mask
Xa ungaphantsi kwamanzi, gcina ugxininiso lwakho ekuphononongeni kunye nokonwabela ixesha lakho, vumela iOceanic ikhathalele ukhuseleko lwakho. I-Shadow Frameless Dive Mask ine-100% ye-skirt ye-silicone yolwelo edityaniswe kwilensi epholileyo ebonelela ngokuthe ngqo ukuguquguquka okungahambelaniyo. Ikwasebenza njengemaski egcinayo njengoko unokusonga ngokulula kwaye uyifake kwipokotho yakho ye-BC. Ngelixa ukuyo, yongeza umbala othile kwimaski yakho. Zinombala o-7 ongakhetha kuzo.
Inoyilo lwevolyum ephantsi kakhulu.
Inamaqhosha ajikelezayo okulungelelaniswa lula.
Ngaphandle kwesakhelo, imaski ilula kwaye ibonelela ngommandla omkhulu wokujonga.
10. I-OMGear Diving Mask
Thenga ngoku kwiAmazon
Ngaba uthatha usapho lwakho lonke lwe-scuba diving? Sinemfuno yakho yeemaski zokuntywila ezigqunyiweyo! Olu chungechunge lweemaski zokuntywila kwi-OMGear zilungele abantwana kunye nabantu abadala. Isebenzisa umtya we-silicone yebakala lokutya kunye nesiketi esibonelela ngamava amnandi kumsebenzisi. Ziyakwazi eco-friendly nazo. Beza nesigqubuthelo sempumlo esilungele abantu abangakwaziyo ukulawula ukuphefumla kwabo phantsi kwamanzi.
I-lens yenziwe ngeglasi epholileyo.
Basebenzisa i-skirt yobuso obuguquguqukayo kunye nomtya oguquguqukayo kakhulu ukuqinisekisa ukuba ihambelana neentloko zayo nayiphi na imilo kunye nobukhulu.
Banesigqubuthelo semaski esiyi-3mm esithambileyo se-neoprene ngasemva ukunciphisa ukujiya kweenwele.
Shumi elinanye. TUSA M-1003 Freedom Elite Scuba Diving Mask
Yiva ihlabathi elingaphantsi kwamanzi licace ngakumbi kunanini na ngaphambili ngoncedo lwe-TUSA M-1003 Freedom Elite Scuba Diving Mask. Ine-lens enye enika i-crystal ecacileyo kunye ne-engile yokujonga ebanzi. Isebenzisa i-Freedom Technology eyilwe ziingcali zase-TUSA. Le teknoloji yoyilo ivumela imaski ukuba ilingane kakuhle kulo naluphi na uhlobo lobuso oluneemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Inomphetho ojikelezayo we-skirt owenziwe nge-cross-sectionally ocinezela uxinzelelo kunye nokunciphisa i-creasing ebusweni.
andizange ndibenemibuzo kulutsha
Ukulungelelanisa inkqubo ye-buckle ngokukhawuleza
Uyilo lwensimbi engenasici
Inesakhelo esiphakathi-esikhulu esinomthamo omncinci wangaphakathi.
Ukulungelelaniswa okukhululekile, i-skirt ejikeleze ibunzi kunye ne-cheekbones yenzelwe kunye ne-dimples eyandisa i-softness ye-skirt.
Inkqubo yebhanti ye-Five Angle Strap Adjuster inokuhamba ngaphakathi okanye ngaphandle kwaye inokujikelezwa idigri ze-180 ukulungiselela ukulungelelanisa kakhulu-customizable.
Umtya wemaski usebenzisa uyilo olunemigangatho emithathu ejikela ngasemva kwentloko yakho ukuze ilingane kwigophe layo lendalo.
Nantso ke! Uluhlu lweemaski zokuntywila ezili-11 ezilungileyo onokuthi uthenge kuzo. Kodwa hlala ulindile, sinezinto ezimbalwa esinokwabelana ngazo malunga neemaski zokuntywila. Nangona uthenga kuluhlu lwethu olukhethwe ngesandla, kuya kufuneka uqonde ukuba kufuneka ukhethe njani imaski elungileyo.
Uza kuba ngaphantsi kwamanzi ixesha elide kakhulu, ke ngaphambi kokuba uthenge imaski, nazi izikhombisi ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni.
Umgangatho weLens: Esona sizathu siphambili sokuba ungene ngaphantsi kwamanzi kukubona kwaye ube namava. Eyona ndlela ilula yokwenza oko kukuba nelensi elungileyo kwimaski yakho. Ilensi ekumgangatho ophantsi ayivumeli ukukhanya kwendalo okwaneleyo ukuba kudlule. Ngokufanelekileyo, i-lens kufuneka ivumele ubuncinane i-90-95% yokukhanya ukuba idlule. Ezi nkcukacha, kwiimeko ezininzi, ziya kukhankanywa kwiinkcukacha, ngoko zifunde. Kwaye, qiniseka ukuba uthenga imaski esebenzisa ilensi yeglasi epholileyo ekwaqinile kwaye yomelele ukumelana noxinzelelo oluphezulu lwangaphantsi kwamanzi.
ILensi enye/Embini: Uyilo lwe-lens enye luvumela ukujonga okungaphazanyiswa ngenxa yokungabikho kwe-ridge phakathi. Ukuba nemaski yeelensi ezimbini kunika ii-engile zokujonga ezibanzi kunye nombono ocacileyo weperipheral xa kuthelekiswa nemaski yelensi enye. Kodwa i-downside yoyilo lwe-lens enye kukuba ayinakukwazi ukuthwala iilensi ezimiselweyo kwaye umthamo wemaski mkhulu kakhulu. Ngeelensi ezimbini, kuya kubakho ummango phakathi onokuthi wenze indawo engaboniyo.
Isiketi: Iimaski zokuntywila zisebenzisa umcu we-silicone ojikeleze isakhelo esaziwa ngokuba sisiketi. Ngokuxhomekeke kumgangatho kunye noyilo lwe-skirt, ibonisa ukuba inokulawula kangakanani ukuvuza kwamanzi. Iimaski zokuntywila zisebenzisa iziketi ezibini. Esinye isiketi sifakwe kwisakhelo esithatha isimo sobuso bakho kwaye siyeke ukuvuza kwamanzi. I-skirt yesibini ye-silicone ingaphakathi kwe-mask ejolise ekunikezeni induduzo kunye nokunciphisa uxinzelelo olubangelwa ngamanzi.
Isakhelo seMaski: Kukho iindidi ezimbini zeemaski- ezifakwe kwifreyimu kunye nefreyimu. Iimaski ezakhiweyo zomelele ngakumbi kunezingenafreyimu. Banikezela ngesakhono sokwenza ngokwezifiso kuba unokubahlukanisa kwaye uyibuyisele kunye ngokulula. Ukuba usebenzisa i-lens ye-prescript, ungazongeza ngeemaski eziqingqiweyo. Kwelinye icala, iimaski ezingenasakhelo zaziwa zikhaphukhaphu kwaye zinoyilo lwevolyum ephantsi eyenza kube lula ukulinganisa. Kuba iimaski ezininzi ezingenasakhelo zinokusongwa kwaye zifakwe epokothweni yakho ngokulula, zinokusetyenziswa njengemaski egcinayo.
Umtya Wemaski: Umtya yeyona nto ibambe imaski ebusweni. Uninzi lweempawu kuluhlu lwethu zisebenzisa izinto ze-silicone kumtya. Esi sixhobo sivumela ukuba sithathe imilo yentloko kwaye sihlale ngokukhululekile. Ezinye iibhrendi zikwabonelela ngezigqubuthelo zemitya ezithintela ukuba iinwele zakho zingabi phithi.
Iqhina: Iimaski ezinamaqhina akumgangatho ophantsi zinokuba yingxaki enkulu xa uzama ukuziqhelanisa. Iimaski zokuntywila zanamhlanje zifakela i-buckle kwi-skirt endaweni yesakhelo, okwenza kube lula ukuyibeka ngokuchanekileyo. Ikwanceda ekusongeni iflethi yemaski, ukuyenza ihambelane ngakumbi nokuhamba.
Ngesixhobo sokuntywila esifanelekileyo, akunyanzelekanga ukuba ube ngummi waseAtlante ukuze ukonwabele ulwandle. Kwaye ngoncedo lweempawu kuluhlu lwethu, unokufumana amava ehlabathi elingaphantsi kwamanzi ngokwemiqathango yakho. Siyathemba ukuba olu luhlu lusandula ukukunika isinxibo esinjalo kwaye likusondeze kumava amangalisayo nangenaxhala.
Imisebenzi Ye Abadala Ikhadi Making Spa Vacation Destinations Uqhawulo Mtshato Ngurhulumente Imizekelo Ye Tributes Given At Funerals
Imibuzo eyi-100 yokubuza iqabane lakho
Eyona mibala yokuqubha yolusu olukhanyayo
intombazana eneminyaka eli-17 ubudala kufuneka ibenobunzima obungakanani
indlela yokuvula iwotshi epokothweni ye-illinois
abongameli kunye namasekela abongameli bamazwe amanyeneyo